भाग्यमानीले मात्रै देख्न सक्ने यो नागको अन्डालाई देख्ने बितिकै निस्वार्थ मनले लाइक र सेयर गर्नुहोला, अबस्य हजुरहरुको मन को इच्छाहरु पूरा हुनेछ्न! – " कञ्चनजंगा News "
भाग्यमानीले मात्रै देख्न सक्ने यो नागको अन्डालाई देख्ने बितिकै निस्वार्थ मनले लाइक र सेयर गर्नुहोला, अबस्य हजुरहरुको मन को इच्छाहरु पूरा हुनेछ्न!
No Comments on भाग्यमानीले मात्रै देख्न सक्ने यो नागको अन्डालाई देख्ने बितिकै निस्वार्थ मनले लाइक र सेयर गर्नुहोला, अबस्य हजुरहरुको मन को इच्छाहरु पूरा हुनेछ्न!
कास्की खबर: पूरा पढ्नुहोश !मानव सभ्यताको शिशु बिहानीमा आदिम मानवको आद्यःचेतनाले प्रकृतिको विनासकारी र कल्याणकारी रुपलाई अदृष्य शक्तिद्धारा सञ्चालित भएको ठान्यो ।
धनियाका दाना स्काग तिहारको दिन तपाईले आफ्नो घरको बगैँचामा धनियाँको दाना कसैलाई थाहा नदिई लक्ष्मी माता प्रसन्न हुने मान्यता रहेको छ । गरगहना : काग तिहारको दिन सुन तथा चाँदीका गरगहना खरिद गर्नु शुभ मानिन्छ । कसैलाई थाहा नदिइकन खरिद गरेको गरगहना लक्ष्मीलाई अर्पित गरेमा धन लाभ हुनेछ ।
शंख : शंखलाई हिन्दु धर्ममा विशेष स्थान दिइएको हुन्छ । घरमा शंख बजाउनाले घर शुद्ध हुने मान्यता रहेको छ । काग तिहारको दिन कसैलाई थाहा नदिइ घरमा शंख ल्याएर लक्ष्मीलाई अर्पित गरेमा लक्ष्मी खुसी हुने गर्छिन् ! आफ्नो बिचार तल कम्मेन्ट बक्समा लेख्नुहोला!
← पाथिभारा माताको दर्शन गरि सन् २०२० मा चम्किदैछ यि ५ राशिहरूकाे भाग्य, हेर्नुहोस २०२० काे वार्षिक राशिफल: भिडियो सहित → छोरी ट्रोल हुँदा भड्किए अजय देवगन, अजयको रिसको पारो झनै माथि चडयो